सिरहा र महोत्तरीमा आगलागी हुँदा ५ लाखको क्षति
पुस २३ गत्ते , जनकपुरधाम ।
सिरहा र सप्तारीमा भएको आगलागीमा दुई वटा फुसको घर जलेर नष्ट भएको छ । आगलागीमा परी अन्दाजी ५ लाख ६० हजार मूल्य बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
आज बिहान २ बजेतिरको समयमा सिरहा नवराजपुर गाउँपालिका वडा नं. १ गेरुवामा आगलागी भएको हो । आगलागीबाट स्थानीय रामेश्वर यादवको फुसको छाना भएको १ तले घर जलेर पूर्ण रुपमा नष्ट भएको छ ।
चुल्होमा बालेको आगोको खरानी बाहिर फालेको ठाँउबाट आगोको झिल्को उछिट्टिएर आगलागी भएको अनुमान गरिएको छ । आगलागीमा परी एक हल गोरु, भैसी जलर घाईते भएका छन् भने एउटा पाडी, खशी र बाख्रा एक एक वटा जलेर मरेका छन् । त्यस्तै घरमा रहेको ४० मुरी धान तथा अन्य भाडा वर्तन, लत्ताकपडा, फर्निचर, साईकल जलेर नष्ट भएको पीडित परिवारले जनाएका छन् । आगलागीमा २ लाख २५,००० मुल्य बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालय महेशवारी सिरहाबाट खटिएको प्रहरी टोली र स्थानीय बासिन्दा मिलेर एक घण्टापछि आगो नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
महोत्तरीको औरही नगरपालिका ३ श्रीपुरमा हिजो साँझ आगलागी भएको छ । आगलागीबाट स्थानीय महेन्द्र यादवको फुसको घर जलेर नष्ट भएको छ । आगो ताप्न बालेको घुरबाट अचानक आगो सल्किन गई घर पुर्ण रुपमा जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ । फुसको घरसँगै जोडिएको यादवको ईट्टा र टालीले छाएको एक तल्ले घरमा समेत आगो सल्किएको थियो ।
आगलागीबाट घरमा रहेको २० हजार रुपैयाँको सोनि टेलिभिजन १ थान, ५ हजार मुल्यको एउटा, १ लाख मुल्य पर्ने ज.२.प. ६०२ नम्बरको यामहा मोटरसाइकल एउटा, घर भित्र रहेको नगद १ लाख ५० हजार, ३० हजार मुल्यको फुसको घर, इँट्टा र टालीले छाएको घरमा पुगेको क्षति समेत गरी जम्मा ३ लाख ३५ हजार मुल्य बराबरको क्षति भएको अनुमान प्रहरीले गरेको छ ।
आगो अस्थायी प्रहरी पोष्ट कठुधार महोत्तरीबाट खटिएको प्रहरी र स्थानीयबासीको सहयोगमा नियन्त्रणमा आएको थियो ।